‘जाडोमा कोरोना सङ्क्रमण झन् बढ्न सक्छ, दशैँमा फोनबाटै मान्यजनको आशीर्वाद लिऔँ’ | Ratopati
अमेरिकामा २७ वर्ष काम गरेका प्रा.डा. जनक कोइरालासँगको अन्तरवार्ता
अमेरिकामा झन्डै २७ वर्ष सङ्क्रामक रोगबारे प्राध्यापन, अनुसन्धान र उपचारमा खटिएका डा. जनक कोइराला कोरोना सङ्क्रमण सुरु हुनुभन्दा २ साताअघि नेपाल आएका थिए । नेपालका अस्पतालमा काम नगरे पनि हाल उनी नेपाल स्वास्थ्य परिषदमा परामर्शदाताका रूपमा काम गरिरहेका छन् ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट एमबीबीएस गरेर २७ वर्षअघि अमेरिका गएका कोइरालाले अमेरिका पुगेर फिजिसियन र सङ्क्रामक रोगमा विशेषज्ञता हासिल गरेका छन् । यस्तै जनस्वास्थ्य विषयमा स्नातकोत्तर पनि गरेका छन् । प्रस्तुत छ सङ्क्रामक रोगबारे निकै लामो समय प्राध्यापन, अनुसान्धान र उपचारमा संलग्न रहेका प्रा.डा. जनक कोइरालासँग रातोपाटी संवाददाताशम्भु दङ्गालले कोरोना भाइरससँग जोडिएका विभिन्न पक्षमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानी :
तपार्इंले बुझ्नुभएको कोरोनाभाइरस कस्तो भाइरस हो ?
कोरोना भाइरस सामान्यतः रुघाखोकी लगाउने भाइरस हो । ६ प्रकारका भाइरस पहिलेदेखि नै थिए । सन् २००० तिर सार्स भन्ने भाइरस युरोप, क्यानडा र एसियामा पनि फैलिएको थियो । त्यो पछि हराएर गयो । मर्स भन्ने भाइरस मध्यपूर्वका देशहरूमा छ । यो चाहिँ ऊँटबाट मानिसमा सर्छ । सार्स कोभ टु भन्ने चाहिँ यो कोभिड–१९ भाइरस हो ।
विभिन्न कालखण्डमा नयाँ भाइरसको कसरी उत्पत्ति हुन्छ ? नयाँ भाइरस उत्पन्न हुनुको खास कारण के हो ?
विभिन्न किसिमका भाइरस पशुपंक्षीबाट आउँछन् । मर्स ऊँटबाट मान्छेमा लाग्दोरहेछ । सुरुमा कोरोना भाइरस बिरालोबाट आउँथ्यो । यसपालिको कारोनाभाइरस चमेरोबाट अर्को जन्तुमा सरेर त्यो जन्तुको मासु मान्छेका लागि चिनियाँ बजारमा ल्याउँदा त्यसबाट सरेको भन्ने अहिसम्मको अनुमान छ ।
तपाईंले पुरानो कोरोना भाइरस भन्नुभयो । पहिला पनि यो भाइरस थियो ?
पहिलादेखि नै ६ किसिमको कोरोना भाइरस रुघाखोकी मात्रै गराउने भाइरस थियो । त्यसलाई मान्छेलाई लाग्ने भाइरस भनिन्छ । त्यसले सामान्य किसिमको मात्रै रुघाखोकी लाग्थ्यो । कडा खालको भाइरस चमेरोबाट मान्छेमा आयो । बढी असर गर्नेखालको यसलाई सार्स कोभ थ्री भनिन्छ । यो कोरोना भाइरसको एउटा प्रकार हो ।
तपाईंले कोरोना भाइरस रुघाखोकी लगाउने भाइरस जस्तै हो भन्नुभयो ? रुघाखोकीमा प्रयोग हुने औषधिले यसका लागि किन काम गर्न सकेन ?
रुघाखोकीको औषधि भनेको सामान्यतया लक्षणहरूलाई मात्र सामान्य थामथुम पार्ने प्रकारको हुन्छ । हाम्रो शरीरले नै आफै रोग प्रतिकारात्मक शक्ति एन्टिबडीले भाइरससँग सम्मिलित हुन्छ र सेतो रक्तकोषिकाले मारेर जिउबाट हटाउँछ । फ्लु भए पनि अरू रुघाखोकीको भाइरस भए पनि त्यसरी हटाउँछ । कोरोनाले चाहि एन्टिबडीहरूलाई नै आक्रमण गरेर मान्छेलाई झन् कमजोर बनाउँदो रहेछ । साइटोक्राइनस्टोम आएर मान्छेलाई झन् साह्रो पारेर कतिपय मानिस मर्ने नै हुन्छ । यसले फोक्सोलाई नै क्षति पु¥याउने, कसै कसैलाई मुटुमा नै असर पार्ने, कसैलाई रगतमा नै असर गरेर अरू जटिलताहरू निम्त्याउँदो रहेछ । भाइरसले मान्छे मार्नेभन्दा पनि भाइरसले आक्रमण गरेपछि शरीरको प्रणालीलाई बिगारिदिँदो रहेछ र त्यसैबाट मान्छे रोगी हुँदै मर्ने हुँदोरहेछ ।
कोरोना भाइरस लक्षणसहित र लक्षणरहित गरेर दुई प्रकारले सङ्क्रमण हुने रहेछ । यस्तो किन हुन्छ ?
कोरोना सङ्क्रमणको कसैलाई लक्षण नै हुँदैन कसैलाई सामान्य लक्षण र कसैलाई एकदमै गंभीर पार्नपनि सक्छ । युवाहरूमा रोग प्रतिरोधी क्षमता धेरै हुने भएर उनीहरूमा सामान्य लक्षण मात्र देखिन्छ । जो ५० वर्षबाट माथि जति बुढो हुँदै गयो त्यति नै रोगसँग लड्ने शक्ति कम भएर गएको हुन्छ । अरू रोगहरू लागेको मान्छे जस्तै मधुमेह, दम, श्वासप्रश्वास, मुटुका रोगी, क्यान्सरका रोगी लगायतको रोग प्रतिरोधी क्षमता घटेको हुन्छ । मुटुरोगीहरूलाई फोक्सोमा असर ग¥यो भने यसै पनि कमजोर भएको मान्छलाई अक्सिजनको कमी हुन्छ । उहाँहरूलाई झन् बढी असर गर्ने हुन्छ । त्यो प्रकारका मान्छेहरूको मृत्यु धेरै हुन्छ । अर्थात् पहिलेदेखि नै रोगी भएको र रोगप्रतिरोधी क्षमता कम भएको मानिसलाई विशेषगरी वृद्ध वृद्धाहरूको बढी मृत्यु हुने सम्भावना रहेको हुन्छ ।
कोरोना सङ्क्रमण भएर निको भएको व्यक्तिमा अन्य स्वास्थ्य समस्या निम्तिने जोखिम कतिको हुन्छ ?
अहिलेसम्म लक्षण नभएको र सामान्य लक्षण नभएकोलाई केही पनि नभएको पाइएको छ । कसैलाई २ हप्तामै निको हुन्छ । कसैलाई साह्रो पारेको छ भने एक महिना पनि लाग्ने हुन्छ । जस्तै १ सय जनामा एक दुई जनालाई साह्रै नै गाह्रो बनाउँछ । दीर्घरोगीहरू वा अन्य रोग लागेकाहरूलाई लामो समयसम्म पनि असर गर्न सक्छ । मुटुरोग बढाउने, फोक्सोमा पनि क्षति पु-याउने, लामो समय अक्सिजन चाहिने त्यस्तो पनि हुन सक्छ ।
चीनको उहानमा कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम भएपछि गरिएको अध्ययन अनुसार सङ्क्रमण निको भएका व्यक्तिको फोक्सोमा असर देखिएको औँल्याइएको थियो । के सङ्क्रमण भएर निको भएको व्यक्तिमा पछि अन्य स्वास्थ्य जटिलता निम्तिन्छ ?
यो सङ्क्रमण झन्डै ९ महिना पहिलेबाट फैलिएको हो । यसको पछि कस्तो असर पर्छ भनेर अध्ययन गर्न अझै एक दुई वर्ष भएपछि थाहा हुन्छ । अहिलेसम्मको लक्षण हेर्दा फोक्सोमा अलिअलि असर पारेको छ । सामान्य लक्षण त निको हुन्छ तर जसलाई साह्रै गाह्रो भएर भेन्टिलेटरमै राख्नुप¥यो तिनीहरूलाई लामो समयसम्म फोक्सोमा असर गर्न सक्छ । उनीहरूलाई दमको रोग वा मुटुको रोग जस्तो स्वास्थ्य समस्या हुन सक्छ ।
कोरोना सङ्क्रमणको औषधि पत्ता नलागेका बेला अहिले जुन उपचार विधि प्रयोग गरिएको छ ती कतिको प्रभावकारी देखिएका छन् ?
अहिले हामीले उपचार गरिरहेको एउटा कोभिड प्लाज्मा हो भने अर्को रेम्डेसिभिर हो । त्यसको असर अहिले हेरिरहेका छौँ । डाक्टरहरूको अनुभवमा यी दुवै पाएकोहरूको स्वास्थ्य धेरै राम्रो भएको छ । यसको पूरै विश्लेषण गर्न अझै दुई हप्ता जति लाग्छ ।
नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको अवस्थालाई तपाईंले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै दैनिक ६० प्रतिशतभन्दा बढी सङ्क्रमित हुन थालेका छन् ।
अहिले लकडाउन खोलेपछि पक्कै पनि पहिलाभन्दा धेरै सङ्क्रमण बढ्छ । अहिले ९० प्रतिशतभन्दा बढीले मास्क लगाएको त देखिन्छ । अब मास्क लगाईकन पनि हुल भीड धेरै भयो । सँगसँगै होटल रेस्टुरेन्टहरूमा बसे भने, मान्छेले आफ्नो सुरक्षा सावधानी अपनाएन भने गाह्रो हुन्छ । फेरि दशैँतिहार आउँदैछ । त्यो बेला पनि भीडभाड गर्ने, बूढाबूढीकहाँ गएर टीका लगाउने ग-यो भने मान्छेलाई सर्छ । युवा उमेरका बाहिर निस्कनेलाई त धेरै गाह्रो पार्दैन । तर रोगी बूढाबूढीको घरमा गएर सारे भने त त्यसले धेरै सिरियस पार्ने हुनाले यसबारेमा सबैजनाले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अब जाडो महिना सुरु हुँदैछ । चिसोका कारण भाइरस सङ्क्रमण बढ्ने सम्भावना कतिको रहन्छ ?
चिसोमा सङ्क्रामक भाइरस बढ्छ । अरू अरू भाइरसहरू जस्तै इन्फ्लुएन्जा पनि आउँछ । अरू भाइरस पनि आएको बेला यो कोरोना भाइरस हो वा अरू इन्फ्लुएन्जा भाइरस हो झुक्किने सम्भावना धेरै हुन्छ । रुगाखोकी लागेको बेला झुकिन्छ । यस्तो बेला चाँडो सर्ने पनि हुन्छ । बिरामी समयमा उपचार गर्न गएन भने पनि गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण सकभर जाडोयाममा अझ बढी सुरक्षा सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले सबैलाई विचार गरेर साध्य पनि भएन् । सबैले आफ्नो आफ्नो विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । सबैले मास्क लगायो, पञ्जा लगाउने, हात धुने काम गरेभने एक अर्कामा सर्ने सम्भावना कम हुन्छ । सबैले रोगी, वयोवृद्धहरूलाई आफ्नो आफ्नो घरमा बचाउने काम गर्नुप¥यो ।
जाडोयाममा रुघाखोकी लाग्दा यो सामान्य इन्फ्लुएन्जा हो, यो कोरोना भाइरस हो भनेर कसरी पत्ता लगाउने होला ?
कोरोनाले साह्रै नै बिरामी पार्छ । जिउ दुख्ने, टाउको दुखाउने, खोकी धेरै लाग्ने हुन्छ । तर सबै छुट्याउन सकिँदैन, परीक्षण नै गर्नुपर्ने हुन्छ । इन्फ्लुएन्जाको लक्षण पनि त्यस्तै हुन्छ । यसका लागि परीक्षण नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले सरकारले लक्षण नदेखिएकाहरूलाई पीसीआर परीक्षण नगर्ने नीति लिँदैछ । तपार्इंको विचारमा यो कत्तिको उपयुक्त हो ?
सरकारले पीसीआर परीक्षण गर्ने ल्याब धेरै बढाउन सकेको छैन । यसको खर्च पनि धेरै छ । सरकारको बजेट सकिँदै गएकाले होला । बजेट पाएसम्म वा अरू कतैबाट डोनेसन पाएसम्म यसलाई अझै बढाउँदै लैजानुपर्ने हो । मेडिकल काउन्सिलहरू, स्वास्थ्यसंस्थाहरू हामी चिकित्सकहरूले चाहिँ पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउँदै लैजानुपर्छ भनेका छौँ । यो चाहिँ सरकारले आर्थिक हिसाबले मात्रै दायरा बढाउन नसकेको जस्तो लाग्छ । अर्को कुरा पीसीआरले मात्र भ्याएन भने अरू अरू सस्ता प्रविधि, एन्टिजेन प्रविधि सबै गरेर भए पनि परीक्षणको दायरा बढाउनैपर्छ । लक्षण छैन भनेर मान्छेहरू बाहिर हिँडिरहेका हुन्छन् तर सङ्क्रमण बोकेर अरूलाई सारिरहेका हुन्छन् । परीक्षण घटाउनु ठीक हैन भनेर हामीले भनिरहेका छौँ ।
पहिले आरडीटी विधिबाट परीक्षण गरिन्थ्यो, त्यसको व्यापक विरोध भयो अहिले पीसीआरपछि एन्टिजेन किटबाट पनि परीक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आएको छ । पीसीआरको तुलनामा एन्टिजेन किट कतिको भरपर्दो हुन्छ ?
एन्टिजेन किट आरडीटीभन्दा धेरै नै फरक हो । आरडीटी भनेको शरीरमा भाइरस पसेपछि बडीमा एन्टिबडी प्रोडक्सन हुन्छ । त्यो दुई हप्तादेखि ४ हप्तासम्म बढेर जान्छ । चीनबाट ल्याएको त्यो प्रविधि कमजोर खालको रहेछ । तर एन्टिजेन किट भने भरपर्दो हुन्छ । अमेरिका, युरोप लगायतका धेरै देशमा यसको सुरुवात गरिसकेको छ । सबैभन्दा राम्रो परीक्षण गर्ने विधि पीसीआर नै हो तर पीसीआर नभएको ठाउँमा वैकल्पिक रूपमा एन्टिजेन किट प्रयोग गर्न सकिन्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि दशौँ लाख सङ्ख्यामा किनेर पीसीआर नभएको देशमा पु¥याउने भएको छ । यसको लागत पनि कम हुन्छ । एक हजारभन्दा कम रूपैयाँ भनेर सरकारले मूल्य राखेको छ । मेरो विचारमा ५ सय देखि ८ सयभन्दा बढी लाग्दैन । पीसीआर नभएको ठाउँमा अलिकति कम क्षमता भए पनि एन्टिजेन किट ठीक हुन्छ । पीसीआर शतप्रतिशत नतिजा निकाल्छ भने यसले ९७ प्रतिशतसम्म भरपर्दो हुन्छ ।
यतिबेला विश्वका विभिन्न देशमा कोरोनाको भ्याक्सिन सङ्क्रमितमा परीक्षण गर्न थालिएको छ । नेपालमा पनि भ्याक्सिन ट्रायल गर्नेबारे चर्चा चल्ने गरेको छ । तेस्रो चरणमा पुगेको भ्याक्सिन प्रयोग गर्दा त्यसले कुनै असर गर्ने सम्भावना हुन्छ कि हुन्न ?
यसबारेमा दुईवटा पक्ष छन् । तेस्रो चरणमा परीक्षण गर्नेहरूले नेपालमा पनि परीक्षणको प्रस्ताव राख्नेहरू थुप्रै आएका छन् । त्यो ठीक छ तर कस्तो हुन्छ भने त्यो ट्रायललाई ल्याएकाले बीस तीस हजारलाई देलान्, धेरैलाई दिन सकिँदैन । त्यो पाउने वित्तिकै ल्याउने भनेर हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ तर अहिले त लाखौँ लाख नेपालीलाई भ्याक्सिन दिनुपर्ने हो बूढाबूढी रोगीहरूलाई । अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, फिल्डमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स चालक लगायतलाई फ्रन्टलाइनमा गएर काम गर्नेहरूका लागि भ्याक्सिन दिनुपर्छ । त्यसका लागि १० देखि २० लाख डोज चाहिन्छ । त्यसकारण हामीले के भनेका छौँ भने सरकारले विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनसँग मिलेर भ्याक्सिन ल्याउने कोसिस गर्नुपर्छ । त्यो ल्याउनका लागि स्वीकृत भएपछि मात्र ल्याउन पाइन्छ । त्यो नपाउन्जेलसम्मका लागि डब्लूएचओ र सरकारले क्लिनिकल ट्रायलमा पाउने भ्याक्सिन ल्याएर पनि नेपालमा टेस्ट गर्दै गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ ।
सरकारले २५ हजार कोरोना सङ्क्रमणको एक्टिभ केस देखियो भने फेरि लकडाउन गर्नुपर्छ भनेको छ । कोरोना रोकथामका लागि यो शैलीको कत्तिको व्यावहारिक हो ?
त्यसरी देशभरी नै लकडाउन गर्नु ठीक कुरा हैन भनेर हामीले पनि भनेका छौँ । देशभरि लकडाउन तोक्नुको सट्टा जस्तै विराटनगरमा फैलियो, काठमाडौँमा फैलियो भने कुन कुन ठाउँमा फैलिएको छ त्यही ठाउँलाई मात्र बन्द गर्नुप¥यो । निश्चित क्षेत्र, ठाउँ ठाउँमा, जिल्ला जिल्लामा गरेको राम्रो हो । २५ हजार पुगेपछि देशभरि नै किन लकडाउन गर्नु ? जुम्लामा छैन, अन्य नभएको ठाउँमा किन लकडाउन गर्नु ? अहिले त आधाभन्दा बढी सङ्क्रमण त काठमाडौँमा छ, जे गर्ने हो काठमाडौँमा गर्नुप-यो । त्यसकारण क्षेत्र क्षेत्र हेरेर मात्र गर्नुप¥यो देशभरी नै गर्नु ठीक हैन जस्तो मलाई लाग्छ ।
नेपालमा अहिले केही मानिसको समूह कोरोना भाइरस भन्ने नै छैन । यो हावादारी कुरा हो । मेडिकल माफियाहरूले चलाएको भ्रम र आतङ्क हो भनेर सामाजिक सञ्जाल तथा मिडियामार्फत भनिरहेका छन् । उनीहरूले त्यहीअनुसार आफ्ना तर्क पनि पेस गर्ने गरेका छन् । अन्य केही देशमा पनि कोरोना विरोधी प्रदर्शन भएको देखेका छौँ । कोरोनाविरोधीहरूले जुन तर्क दिने गरेका छन् त्यसमा कतिको सत्यता छ ?
यसरी भ्रामात्मक तर्क गर्नेहरू खराब तत्त्व हुन् । जो मान्छेहरूले स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाइरहेका छन्, उनीहरूलाई पनि यस्ता कुराले भड्काउने गर्छ । केटाकेटी, किशोर उमेरकाहरू बढी सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेहरू उनीहरूले भनेका कुरा पत्याउँछन् । यस्ता मान्छेलाई हत्तोत्साही गर्नुपर्छ र सामाजिक सञ्जालबाट पनि त्यस्ता कुरा हटाउनुपर्छ । फेसबुकले पनि यस्ता कुरा ब्लक गर्नुपर्ने हो । यसरी भ्रम फैलाउनेमा एकजना सबैभन्दा ठूलो मान्छे अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नै थिए । अहिले उनी र उनको श्रीमतीलाई नै कोरोना सङ्क्रमण भएको समाचार आएको छ । यसरी भ्रम फैलाउनेहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । उनीहरू नेपाली हुन् भने राज्यले सजाय पनि गर्नुपर्छ ।
नेपालमा सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि हालसम्म गरेका काम कत्तिको प्रभावकारी देख्नुभएको छ । आम सर्वसाधारणले अहिलेको अवस्थामा कसरी सुरक्षित रहनुपर्छ ?
सरकारले केही गरेकै छैन त भन्न मिल्दैन । यति लामो समयसम्म जुन लकडाउन ग¥यो, त्यसले देशमा अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा राख्ने, पीसीआर परीक्षणदर बढाउने काममा लागि मद्दत मिल्यो । तर अहिले पछिल्लो एक महिनामा समुदाय स्तरमै फैलन थालिसकेको हुनाले अब चाहिँ होस् गरेर सबैकुरा मिलाएर परीक्षण गरेर समुदायमा कहाँ धेरै फैलिएको रहेछ भनेर एन्टिबडी टेस्ट गरेर कतिसम्म फैलिइसकेको रहेछ । काठमाडौँमा पनि कुन ठाउँमा फैलिएको रहेछ । त्यसबारे अध्ययन गरेर कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।
हामीजस्ता सर्वसाधारणले गर्नुपर्ने ठूलो कुरा छैन । मास्क लगाउने, दूरी कायम गर्ने, भीडभाडमा नजाने, दशैँतिहार नजिकै आएकोले सोसल मिडियाबाटै आशीर्वाद माग्ने, बूढाबूढीलाई बचाउने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।